Izindaba - Ithonya lokushisa kwamafutha ohlelweni lokusebenza lwe-Y81 hydraulic scrap metal baler
1. Ukulimala kwezinga lokushisa eliphezulu likawoyela ohlelweni lokusebenza lwe-hydraulic metal baler. Izinga lokushisa eliphezulu likawoyela lizosheshisa ukuguga noma ukuwohloka kwezigxivizo zenjoloba namapayipi ohlelweni lokusebenza lwe-hydraulic metal baler, kuthinte impilo yabo yesevisi, kulahlekelwe ngisho nokusebenza kokuvala, futhi kwenze isistimu ye-hydraulic ivuze kakhulu. Ikakhulukazi ohlelweni lwe-hydraulic servo, luthinta ukuzinza komsebenzi walo, lunciphise ukunemba komsebenzi; izinga lokushisa endaweni yokusebenza liphakeme kakhulu ngokuvamile ekushiseni okuphezulu okujwayelekile, kulula ukubangela ukuwohloka kwe-oxidation kawoyela wokugcoba, ukwehla kwe-viscosity, ukulahlekelwa umsebenzi wokugcoba.
Ngale njongo, izinga lokushisa likawoyela we-hydraulic we I-Y81 hydraulic scrap metal baleritholakala njalo, futhi kutholakala ukuthi izinga lokushisa langempela lokusebenza ngokuvamile lingama-55 ~ 60 ℃. Ukuze uphenye ukusebenza kwe-demulsification kawoyela we-hydraulic ngaphansi kwesimo sokushisa ngokweqile emsebenzini wangempela. Imiphumela ibonisa ukuthi uma izinga lokushisa lingu-55 ~ 60 ℃, isikhathi sokususa i-demulsification singamaminithi angu-15, okubonisa ukuthi izinga lokushisa linokushintshashintsha okuncane ebangeni lokulawula inqubo kodwa akuthinti ukusebenza kwe-demulsification kawoyela we-hydraulic.
2. Umthelela wokushisa okuphansi ohlelweni lwe-hydraulic. Ebusika obusenyakatho-mpumalanga, izinga lokushisa lasendlini liphansi, ikakhulukazi uma ibhali isebenza ngezikhathi ezithile, lapho iyekwa. Izinga lokushisa lingase libe liphansi kakhulu, uketshezi lwamafutha we-hydraulic luyoba lunamathele noma lube yi-agglomerate, futhi ukusebenza kahle kwawo wonke uhlelo lwe-hydraulic kuzokwehla; ngesikhathi esifanayo ngoba izinga lokushisa liphansi kakhulu, ngenxa yomphumela wokunwetshwa okushisayo nokufinyela kanye nokuqina kwenjoloba emakhazeni, indandatho yokuvala uphawu, ipompo, ukusebenza kahle kwe-valve kuzokwehla, kuzophinde kuthinte ukusetshenziswa kwesistimu yokusebenza ye-hydraulic metal baler kuya endaweni ethile. ububanzi.
3. Kumakhasimende ezifundeni ezahlukene, sinamadivayisi ahambisanayo okushisa nawokupholisa ukuze sivikele I-Y81 hydraulic scrap metal baler.
Isikhathi sokuthumela: Nov-09-2021
Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Scrap Metal Compactor, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Y81 Hydraulic Baler,